कालीगण्डकीमा दुई बेपत्ता- प्रदेश ५ - कान्तिपुर समाचार
कालीगण्डकीमा दुई बेपत्ता
जेष्ठ १०, २०७५ माधव अर्याल
पाल्पा — नुहाउने क्रममा कालीगण्डकी नदीमा बगेर बिहीबार दुई जना बेपत्ता भएका छन् ।
जिल्लाको बगनासकाली गाउँपालिका–६ यम्घाका ३२ वर्षीय गोविन्द परियार र २४ वर्षीय चन्द्रबहादुर परियार बगेर वेपत्ता भएको प्रहरी नायब उपरीक्षक विनोद घिमिरेले बताए ।
उनका अनुसार कालीगण्डकी नदीमा पुजा गर्न गएको र पुजा सकेर नुहाउने क्रममा दुई जना बगेर बेपत्ता भएका हुन् । पुजा गरेर सकेपछि पौडी खेल्दा खेल्दै दुवै जना बगेको प्रत्यक्षदर्शीले बताए ।
वडा नम्बर ६ का वडाध्यक्ष लक्ष्मीप्रसाद अधिकारीका अनुसार बेपत्ता भएकाहरुलाई स्थानीय, प्रहरी र पौड्न जानेका बोटे समुदायबाट खोजी कार्य जारी छ ।
प्रहरीले राम्दी लगायत तल्लो भेगका प्रहरी र स्थानीयलाई समेत यस विषयमा जानकारी गराएर खोजीलाई तीव्रता दिएको जनाएको छ ।
प्रकाशित : जेष्ठ १०, २०७५ १७:४३
अधिकांश विद्यार्थी निजीबाट आए
अधिकांश नयाँ निजी विद्यालय छाडेर आउने छन्
वैशाख २६, २०७५ माधव अर्याल
पाल्पा — शैक्षिक वर्षको सुरुवातमै रामपुर नगरपालिका ५ स्थित रामतुल्सी माविमा ३ सय ५० नयाँ विद्यार्थी भर्ना भए । तानसेन नगरपालिकाको जनता माविमा २ सय ७५ भर्ना भइसके । तानसेनकै देववाणीमा ९० विद्यार्थी नयाँ आए । तानसेन ९ दमकडा माविमा पनि ९० जना नै नयाँ थपिएका छन् । माथागढीको दिव्यज्योति मावि कसेनीमा पनि १ सय ५० भन्दा बढी भर्ना भइसकेका छन् ।
यी केही विद्यालयमा विद्यार्थी भर्नाका उदाहरण हुन् । यीबाहेक रामपुरको दरैठाँटी मावि, गंगा माविलगायतमा विद्यार्थी भर्ना हुने क्रम बढेको छ । निजी विद्यालय छाडेर सामुदायिक भर्ना हुने केही वर्षयता लहर नै चलेको छ । कतिपय निजी विद्यालयले विभिन्न खाले भ्रम छरिदिँदा सामुदायिकमा भर्ना हुन नजाने समस्या पनि छ ।
‘विभिन्न खालका भ्रम फैलाइदिएपछि सिभिल इन्जिनियरिङमा कोटा नै पुगेको छैन,’ दमकडा माविका शिक्षक जीवन आचार्यले भने, ‘४८ जनाको कोटामा ३५ मात्र भर्ना भएका छन् ।’ निजी र सामुदायिकको चर्को प्रतिस्पर्धा छ । अब्बल सामुदायिकमा विद्यार्थीको चाप बढदो छ । कतिपय सामुदायिकमा अंग्रेजी माध्यमको गुणस्तरीय पढाइ हुने भएपछि विद्यार्थी सरकारीमा पढ्न गएका हुन् । जिल्लाका केही सरकारी विद्यालयमा बोर्डिङ छाडेर आउनेको हरेक वर्ष संख्या बढ्दो छ ।
रामपुरको बेझाडस्थित रामतुल्सी माविमा १ हजार ६ सय विद्यार्थी पुगे । १ हजार ३ सय ५० भर्ना भए । यीबाहेक अन्य प्राविधिक विषय पढाइ हुन्छ । प्रधानाध्यापक बालकृष्ण लम्सालका अनुसार निजी विद्यालय नै नभएको समयमा ४ सय विद्यार्थी भएको यस विद्यालयमा अहिले हात्तै बढेर १ हजार ६ सय पुगेको हो । सामुदायिक विद्यालय पनि अब्बल छन् भन्ने उदाहरण हो यो ।
‘विद्यालय वरिपरि ३/४ निजी विद्यालय छन्,’ प्रअ लम्सालले भने, ‘प्रत्येक वर्ष नयाँ बढेका बढ्यै छन् ।’ यसवर्ष ३ सय ५० नयाँ विद्यार्थी आउँदा उनी अचम्मित छन् । उनीहरू अधिकांश निजीबाट आएका हुन् । यहाँ हरेक वर्ष कम्तीमा ५० जना निजी छाडेर आएको उनले बताए । लेकको बस्तीबाट बसाइँसराइका साथै निजी विद्यालय अध्ययन गर्न आउँछन् ।
सीटीईभीटीअन्तर्गतको बाली विज्ञान पढाइ हुन्छ । यहाँ अध्ययन गर्न भनसुन गरेर आउने वातावरण बनेको छ । अंग्रेजी माध्यममा नर्सरीदेखि १० कक्षासम्म पढाइ हुन्छ । ‘विद्यालयलाई विश्वास गरेर पढ्न आउने हुन्,’ उनले भने । एसईई पासपछि कृषि विज्ञान पढाइ हुन्छ । यस्तै ११ र १२ मा विज्ञान पनि पढाइन्छ । सदरमुकाम तानसेनको जनता नमुना माविमा पनि १ हजार ८ सय विद्यार्थी छन् । नर्सरीदेखि कक्षा १० सम्म अंग्रेजी माध्यममा पढाइ हुन्छ । हरेक वर्ष कम्तीमा २ सयभन्दा बढी निजीबाट आउने गरेका हुन् । ‘विगतदेखि नै विद्यार्थी र अभिभावकले माया गरेको विद्यालय बनेको छ,’ प्रअ मेघराज पौडेलले भने, ‘निजी छाडेर आउनेको संख्या सयभन्दा बढी भयो ।’ तानसेनमा नाम चलेका निजी विद्यालय छाडेर कक्षा ८ र ९ मा आउने गर्छन् । ‘नेपाली र अंग्रेजी दुवै माध्यममा पढाइ हुन्छ,’ उनले भने । यस वर्ष कतिपय विद्यार्थी राख्न सक्ने अवस्था नभएर फर्काउनुपर्‍यो । भौतिक पूर्वाधार, शिक्षक संख्या कमीलगायतका कारण आएजति सबै भर्ना गर्न सकिँदैन ।
रामपुरको दरैठाँटी माविमा १ हजार विद्यार्थी छन् । तीन वर्षअघिसम्म ४ सय मात्र भएकामा अहिले संख्या थपिएको हो । नजिकका बोर्डिङ छाडेर यहाँ आउने हरेक वर्ष ५० जना हुन्छन् । कतिपय अझै भर्ना हुन बाँकी छन् । ‘विद्यार्थीले पढाइ राम्रो देख्यो र अभिभावकले विश्वास गर्‍यो भने हुँदोरहेछ,’ प्रअ सुन्दरप्रसाद देवकोटाले भने, ‘विद्यार्थी, अभिभावक र शिक्षकको सहयोगले विद्यालय सुध्रियो र संख्या पनि बढेको छ ।’ पछिल्लो एसईई नतिजाले पनि केही अब्बल सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना हुन आउने विद्यार्थी संख्या बढेको हो । रामपुरको गंगा माविमा ७ सय विद्यार्थी छन् ।
नर्सरीदेखि कक्षा ८ सम्म अंग्रेजीबाट पढाइ थालेपछि निजी विद्यालयबाट समेत आकर्षण बढेको छ । ५ वर्षअघिसम्म ३ सय विद्यार्थी थिए । विद्यालयले नतिजामा सुधार गरेकाले आकर्षण बढेको प्रअ देवराज देवकोटाले बताए । विद्यार्थी र अभिभावकले विद्यालयलाई पत्याएकाले नै संख्या बढेको हो । ‘शैक्षिक वातावरण राम्रो गराउँदै लगेका छौं,’ उनले भने, ‘त्यसमाथि सबै विद्यार्थी र अभिभावकको विश्वास पनि जित्न सक्नुपर्ने रहेछ ।’ पश्चिममा भने थोरै विद्यार्थी भए पनि प्रभात माविको नतिजा हरेक वर्ष राम्रो छ । यहाँबाट शतप्रतिशत विद्यार्थी पास हुन्छन् ।
‘हाम्रो विद्यालयको कार्यक्षेत्र थोरै भए पनि पढाइ गुणस्तरीय छ,’ प्रअ रमेश भट्टराईले दाबी गरे, ‘त्यसैले सबैले विश्वास गरेको अवस्था छ ।’ जिल्ला प्रशासन, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ अधिकृत महेन्द्र सुवेदीले जिल्लाका केही विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या र पढाइको गुणस्तर बढेकाले आकर्षण पनि भएको बताए । उनका अनुसार सामुदायिक विद्यालयमा पढाइको गुणस्तर बढदै गएकाले अभिभावकको आकर्षण बढेको छ । ‘शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावकको सम्बन्ध राम्रो भयो भने पढाइको गुणस्तर पनि सुध्रिन्छ भन्ने देखिएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले प्रत्येक वर्ष भर्ना अभियानमा आकर्षण बढ्ने गरेको छ ।’
प्रकाशित : वैशाख २६, २०७५ १२:०६
प्रदेश लोकसेवा आयोग विधेयक पुनः पेस
महिनौंदेखि सडक अवरुद्ध
स्थानीय तहले बाड्यो जस्ता
विद्यार्थी आकर्षित गर्न झोला र पोसाक
ढुंगाले हानेर श्रीमानको हत्या
नेकपाको जिल्ला नेतृत्व चयनप्रति केन्द्रीय सदस्यको आपत्ति
सम्पादकीय वैशाख १०, २०७६
‘हामीलाई अरू प्राणीभन्दा अलग गर्ने केही छ भने त्यो कहिल्यै नभेटेका ती मानिसहरूका लागि पनि शोकमा डुब्ने हाम्रो क्षमता नै हो ।’ यस मानेमा अमेरिकी लेखक...
जमिनका भोका शासक
राजेन्द्र महर्जन वैशाख १०, २०७६
‘मानिसलाई कति जग्गाजमिन चाहिन्छ ?’ जमिनका भोकाहरू देखेपछि जोकोहीको मनमा उठ्ने प्रश्न हो यो । खासमा यो किसानहरूको जमिनको भोकबारे जानकार लियो टाल्सटायले लेखेको कालजयी कथाको शीर्षक...
रोजगारी सिर्जना कसरी गर्ने ?
गोविन्दराज पोखरेल वैशाख १०, २०७६
विकासे क्षेत्रमा पुरानो प्रचलित भनाइ छ, ‘मानिसको उपकार गर्नुछ भने माछा होइन, बल्छी दिनु माछा मार्नका लागि ।’ यो भनाइको तात्पर्य मानिसलाई स्वरोजगार हुन सिकाऊ भन्ने...
गरिबी निवारणमा सहकारी
इन्दिरा पन्त वैशाख १०, २०७६
श्रीलंकाको सहकारी अध्ययन भ्रमणको सिलसिलामा त्यहाँको सहकारी अभियानले गरिबी घटाउन सरकारसँंग सहकार्य गरेको पाइयो । त्यहाँ सरकारले प्रमाणित गरेको गरिबहरूसँग सहकारीले काम गरेको रहेछ । उनीहरूका अनुसार...
स्याटेलाइट प्रक्षेपणका भ्रम र यथार्थ
मधुसूदन दाहाल वैशाख १०, २०७६
गत साता अमेरिकाको भर्जिनियाबाट नेपालको पहिलो भूउपग्रह ‘नेपाल स्याट १’ प्रक्षेपण भयो । नेपालको ठूलै उपलब्धि जस्तोगरी त्यसबारे प्रधानमन्त्रीदेखि सर्वसाधारणसम्मले चर्चा पनि गर्‍यौं । प्रधानमन्त्री ओलीले त...
कामदार उद्धार हाम्रो कर्तव्य
सम्पादकीय वैशाख ९, २०७६
कतार र साउदी अरब नेपाली कामदारका मलेसियापछिका प्रमुख गन्तव्य हुन् । यी दुवै देशका केही कम्पनी समस्याग्रस्त बनेपछि नेपाली कामदार फसेका छन् । साउदी अरबका अजमिल कन्स्ट्रक्टिङ...
निगरानी पुँजीवादसम्म आइपुग्दा
अच्युत वाग्ले वैशाख ९, २०७६
यतिखेर संसारको बौद्धिक बहस लोकतन्त्र र उदार पुँजीवाद जोखिममा परेको मुद्दामा घनिभूत छ । बहसको केन्द्रमा छन्, इजरायली प्राध्यापक युभल नोआ हरारी र हार्वर्ड विजनेस स्कुलमा...
लोकतन्त्र टिकाउने धार
उज्वल थापा वैशाख ९, २०७६
लोकतन्त्रको अस्तित्व सम्बन्धी जटिल प्रश्नको पहरो ढाल्नुअघि हामीले अठारौँ शताब्दीको उत्तरार्द्धतिरका प्रमुख लोकतान्त्रिक आन्दोलनका लहराहरू समात्नु जरुरी छ । विशेषतः फ्रान्सेली क्रान्तिले विश्वमा ‘स्वतन्त्रता, समानता र...
चोर बाटो विदेश ? हुन्न
दीप्स शाह वैशाख ९, २०७६
केही दिनअघि एउटा दैनिकमा प्रकाशित वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी एउटा समाचार पढ्दा मेरो जीउ सिरिङ्ग भयो । समाचारअनुसार, दलालको लहैलहैमा इराक हिँडेका २० देखि २९ वर्षसम्मका पाँच युवतीको...
पानी बिरालोलाई मायाको खाँचो
कमल मादेन वैशाख ९, २०७६
पानी बिरालो (फिसिङ क्याट) बिरालो समुदायको मूलतः माछा खाने वन्यजन्तु हो । दक्षिणी र दक्षिणपूर्वी एसियाका सिमसार क्षेत्रमा पाइन्छ, यो वन्यजन्तु । हाम्रा तराईको मल्लाह समुदायले माछा...